Home Wararka Mid ka mid ah Aas-Aasayaasha Beerta Nabadda oo Ku Dhaawacmay Weeraradii Muqdisho...
Mid ka mid ah Aas-Aasayaasha Beerta Nabadda oo Ku Dhaawacmay Weeraradii Muqdisho Ka Dhacay
Maxamed Sacuudi oo ka mid ah Ganacsatadii aas’aastay Beerta Nabadda ee loo nasashada tago ayaa waxa uu ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay Qarixii dhawaan ka dhacay nawaaxiga Taalladda SYL ee magaalladda Muqdisho.
Ilo lagu kalsoon yahay ayaa waxay sheegeen in Ganacsade Maxamed Sacuudi ku dhaawacmay Qaraxaasi, isla markaana Daaweyn loogu qaaday Isbitaal ku yaalla caasimadda dalka Kenya ee Nairobi.
Qaar ka mid ah Saaxiibadiisa ayaa iyagna xaqiijiyey in Ganacsade Maxamuud Sacuudi laga jaray Gacanta Midig oo uu si xun uga dhaawacmay.
Xaalladda Ganacsadahaasi ayaa la sheegay inay aad u wanaagsan tahay, isla markaana la filayo inuu dhawaan ka bixi doono Isbitaalka lagu daaweynayo.
Ganacsade Maxamuud Sacuudi waxa uu ka mid ahaa Dhallinyaradii wax ku soo bartay dalka Suudaan ee dib ugu soo laabatay dalka hooyo, wuxuuna ka mid noqday Asaasayaashii maalgashiga ku sameeyey Beerta Nabadda oo ay dadka Reer Muqdisho u soo nasiino tagaan.
Previous articlePuntland oo Awaamiir Cusub Kusoo Rogtay Musharaxiinta Tagaya Deegaanka Tukaraq
Next articleShirka Iskaashiga Caalamka oo Maanta Ka Furmaya Magaalada Brussels Maxey Tahay Danta Ugu Jirta Shacabka Soomaliyeed?
Theresa May oo si rasmi ah isku casishay (Aqriso)